GalaxyCoin စျေး - အွန်လိုင်း GLX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GalaxyCoin (GLX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GalaxyCoin (GLX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GalaxyCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GalaxyCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GalaxyCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GalaxyCoinGLX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.2GalaxyCoinGLX သို့ ယူရိုEUR€0.17GalaxyCoinGLX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.153GalaxyCoinGLX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.183GalaxyCoinGLX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.81GalaxyCoinGLX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.26GalaxyCoinGLX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.47GalaxyCoinGLX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.749GalaxyCoinGLX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.268GalaxyCoinGLX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.28GalaxyCoinGLX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.47GalaxyCoinGLX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.55GalaxyCoinGLX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.08GalaxyCoinGLX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹15GalaxyCoinGLX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.33.58GalaxyCoinGLX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.275GalaxyCoinGLX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.303GalaxyCoinGLX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿6.24GalaxyCoinGLX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.39GalaxyCoinGLX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥21.19GalaxyCoinGLX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩237.96GalaxyCoinGLX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦75.8GalaxyCoinGLX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽14.75GalaxyCoinGLX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.53
GalaxyCoinGLX သို့ BitcoinBTC0.00002 GalaxyCoinGLX သို့ EthereumETH0.000538 GalaxyCoinGLX သို့ LitecoinLTC0.00353 GalaxyCoinGLX သို့ DigitalCashDASH0.00211 GalaxyCoinGLX သို့ MoneroXMR0.00218 GalaxyCoinGLX သို့ NxtNXT14.39 GalaxyCoinGLX သို့ Ethereum ClassicETC0.0293 GalaxyCoinGLX သို့ DogecoinDOGE58.02 GalaxyCoinGLX သို့ ZCashZEC0.00219 GalaxyCoinGLX သို့ BitsharesBTS7.88 GalaxyCoinGLX သို့ DigiByteDGB7.49 GalaxyCoinGLX သို့ RippleXRP0.697 GalaxyCoinGLX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00693 GalaxyCoinGLX သို့ PeerCoinPPC0.696 GalaxyCoinGLX သို့ CraigsCoinCRAIG91.61 GalaxyCoinGLX သို့ BitstakeXBS8.58 GalaxyCoinGLX သို့ PayCoinXPY3.51 GalaxyCoinGLX သို့ ProsperCoinPRC25.23 GalaxyCoinGLX သို့ YbCoinYBC0.000108 GalaxyCoinGLX သို့ DarkKushDANK64.45 GalaxyCoinGLX သို့ GiveCoinGIVE434.98 GalaxyCoinGLX သို့ KoboCoinKOBO47.33 GalaxyCoinGLX သို့ DarkTokenDT0.184 GalaxyCoinGLX သို့ CETUS CoinCETI580.08
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 18:05:02 +0000.